Epic Games သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Android စတိုးကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည် Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS
Fortnite ဟာ Android မှာဂိမ်းတွေအများကြီးပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် ဒီလများအတွင်း။ Epic Games မှဂိမ်းစတင်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ Play Store တွင်ဂိမ်းကိုမဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက် Google ကို ၃၀% မပေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဝေးပြဇာတ်, အထူးသဖြင့်အဘယျသို့နှင့်အတူကောင်းစွာသွားပြီ စွဲလမ်းဂိမ်း.
၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရှိသောကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Epic Games Store ကိုကြေငြာလိုက်သောအခါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းနှင့် Android ထုတ်ကုန်များအတွက် application များဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်လာပါတယ် Play စတိုးနှင့်ပိုရွေးချယ်နိုင်သည်.
ဒီ Epic Games store မှာ developer များဟာသူတို့ရဲ့ဂိမ်းများသို့မဟုတ် application များကိုတင်ပြနိူင်မည်။ သူတို့ကသင့်ကိုသူတို့ရဲ့ရောင်းအားရဲ့ ၁၂% ပေးရမယ် ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကမှ။ ဂူးဂဲလ်၏ ၃၀% အောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းစတိုးကို developer များစွာဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကရှာတတ်၏ အသုံးပြုသူများအား youtubers နှင့် twitchers profile များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဒီစတိုးဆိုင်ထဲမှာ။ ဤလူများ၏လူကြိုက်များမှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာတိုး။ မရပ်တန့်သွားပါ။ ဒါက Epic Games ကနေသူတို့သိတာပဲ။ ထို့အပြင်နောက်လိုက်များသည်ဂိမ်းများကို ၀ ယ်ယူပြီး၎င်းတို့တင်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုငွေရှာနိုင်အောင်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Epic Games Store သည် developer တစ်ယောက်ချင်းစီကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် သင်၏ဂိမ်းသို့မဟုတ်အက်ပ်စာမျက်နှာကိုစီမံခန့်ခွဲပါ၎င်းရဲ့ newsfeed အပြင်။ အခြားဂိမ်းများအတွက်ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့ပါ။ ရှာဖွေမှုတွင်ဂိမ်းများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ငွေပေးချေရန်နည်းလမ်းမရှိနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုထားသည်။ ဤစတိုးတွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများမရှိပါ။
ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဒီ Epic Games Store ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် 2019 ၏ပထမလများတွင် တရားဝင် Android ထုတ်ကုန်များအတွက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်အတိအကျကိုပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ မကြာခင်မှာငါတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့ဒေတာတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ Fortnite ၏အောင်မြင်မှုပြီးနောက် ဒါဝေးကိုဆွဲယူမထင်ထားဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Epic Games သည်၎င်း၏ Android ဂိမ်းစတိုးကိုစတင်ခဲ့သည်
နယ်သာလန်လေတပ်သည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက် Galaxy S9 Enterprise Edition ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်